8.5 Milyan TL Dayactirka Xarumaha Palandöken iyo Konaklı Ski Xarumaha | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari25 Erzurum Review8.5 Million Pounds Dayactir Xarumaha Palandöken iyo Konakli Ski
11 / 11 / 2015 25 Erzurum Review, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, TELPHER
Xaraashka Milyan ee 8.5 ee Xarumaha Palandöken iyo Konaklı Ski Xarumaha: 8.5 milyan ginni ayaa lagu kharash gareeyey dayactirka xarumaha barafka ee Palandöken iyo Konaklı.
Palandöken iyo Konaklı, kuwaas oo ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee barafka adduunka, ayaa hagaajiyay jidadka qalliinka iyagoo ku kharash gareeyay 8.5 milyan ginni ka hor xilli-ciyaareedka, iyagoo ka hortagaya biyo-baxa biyo-soo-celinta iyo dayactirka iyo hagaajinta gondola oo aan socon muddo laba sano ah isla markaana nidaamka baraf-barafka mashiinka ah lagu soo rogay.
Palandöken iyo Konaklı Ski Center, oo martigelinaya Ciyaaraha Caalamiga ah ee Xilliga Jiilaalka 2011, ayaa dardar geliyay si ay u dhameystiraan shaqooyinka barafka dartiis. Isla mar ahaantaana, 100 waxay leedahay laba waddo oo caalami ah oo diiwaangashan oo loogu talagalay slalom iyo garoomo waaweyn oo ku yaal Palandöken, halkaas oo 13 ay ku dul boodi karto jidad gaar ah, midka ugu dheerna waa kiiloomitir 45. Palandöken iyo Konaklı Ski Xarumaha Madaxabanaan ee Maamulka, oo ku soo noqday goobta dhismaha xagaaga, ayaa wata kamarado qalabaysan dhamaan xarumaha barafka. Gondola wiish ee Palandöken, 1500 kun oo mitir 2 mitir iyo xNUMX xayndaab ah oo leh awooda rakaabka ee 900, oo qaada rakaabka 4 saacadiiba, ayaa dib loo cusbooneysiiyay iyada oo lagu daro dayactirka, dayactirka iyo qalabka dayactirka. Jeegaga ugu dambeeya ka hor xilliga qaboobaha waxaa lagu sameeyaa dayactirka iyo hagaajinta shirkad caalami ah. Palandöken 'Mountain waxaa la dhisay ka hor Ciyaaraha Xilliga Jiilaalka, laakiin 140 looma adeegsanin bixitaanka biyaha tan iyo sannaddii 4 kun oo barkadood oo barkadda la cusbooneysiiyay. Thanks to balli weyn oo ku yaal Palandöken, oo ku kacaya qiyaastii 150 milyan oo TL, baraf macmal ah ayaa lagu daadin doonaa maqnaanshaha barafka la'aan. Intii lagu gudajiray howlaha dayactirka, wadooyinka magaalada Palandöken ayaa la balaariyay dhererkooduna kordhiyay. Kaamirooyinka waxaa la dhigay wadooyinka laamiga ah ujeeddooyin amniga awgood, calaamadaha digniinta ayaa la dhigay. Gawaarida 2 ee barafka daboolan, oo loo soo iibiyay inay wax u dhisaan jidadka orodka iyo inay barafka jabsato, laakiin aan weligood la hawlgelin, ayaa loo diyaariyey adeeg. Intaa waxaa sii dheer, wiishka B ee Konakli waxaa loo furay dadka jecel barafka markii ugu horeysay sanadkaan.
“PALANDÖKEN WAA XARUNTA SAFE EE SAFE SKI adduunka”
Si loo helo adeeg kafiican dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajaanibta ah ee imaan doona Erzurum xilliyada dambe ee barafka, Palandöken iyo Konaklı Ski Xarumaha Ganacsiga Madaxweynaha Kemalettin Işık ayaa sheegay inay ku bixiyeen 8.5 milyan ginni Xarumaha Xagaaga barafka ee Palandöken iyo Konakl centers xagaaga.
Bishii Juunyo, waxaan Palandöken iyo Konaklı ka dhignay garoon barafka ugu amaanka badan adduunka. Sannadkii 18, gebi ahaanba waan cusbooneysiinay wiishka gondola halkaasoo aan dayactir iyo hagaajin lagu sameyn. Marka waxay sax noqon laheyd in la yiraahdo waxaan bedelnay wiishka gondola. Intaa waxaa dheer, balliga loo sameeyay ciyaaraha qaboobaha ee 2011 ma uusan haynin biyo. Go'anka balli ka go'ay. Biyaha ayaan ka soo qoday oo ka soo tuuray jirka. Sannadkan barkadda barafka ee macmalka ah ayaa biyaha ku haysa markii ugu horraysay. Amniga darteed, buurta waxaan ku rakibay kamarado. Wadooyinka waaweyn ayaa la ballaariyey. Wadooyinka qulqulaya ayaa ka sii dari doona biyaha barafka, dheecaanka ayaa la sameeyay. Dabaqyo aad u fiican ayaa sugaya kuwa jecel barafka. Ciyaaraha xilliga qaboobaha ee 2011 ee Konakli dalxiis ayaa lahaa kor u qaadista B. Fekerka dadweynaha 'lacagta dowladdu waxay ku dhacday qashinka, dhinac buur ma shaqeeyo, looma isticmaalo, xitaa wadada orodka' ayaa la yiri. Waan daryeelay. Waxaan rajeynayaa in xilligan kor loo qaadayo B uu u furi doono adeegga. Mashiinnada samaynta barafka casriga ah ayaa la buuxiyay. Palandöken iyo Konaklı ma jiraan. Jaceylka Ski ee aan imaanin Palandöken ama Konaklı xilliga jiilaalka 'Waan ku booday ski' waa inaysan oran. Waxaan rajeyneynaa heerka degenaanshaha ee 90 hoteelada inay noqon doonaan 100 sanadkan. ”
Isku khilaaf tartanka Palandöken iyo Konaklı
Qalabka Palandöken Logistics Center Maalgashiga 105 Million TL
Bartamaha Palandöken waxaa ku yaal qulqulka barafka 89
Dhumucyada barafka ee Erciyes Ski Center wuxuu helay dhererka 15